Ny Pocophone F2 dia hanana mari-pahaizana amin'ny rano mitete iray | Androidsis
Herinandro vitsy lasa izay dia nambara fa afaka Xiaomi ajanony ny famoahana telefaona ao anatin'ny faritra POCO anao. Ny fandrosoana goavambe izay nananan'i Redmi teny an-tsena, izay namela antsika finday avo lenta voalohany aza, dia loza mitatao ho an'ity marika ity. Ka afaka nijanona ny famoahana telefaona ny orinasa. Na dia mety ho eo am-pandrosoana aza ny Pocophone F2, araka ny vaovao vaovao efa navoaka.
Tsy fantatray raha hiafara amin'ny fivarotana io Pocophone F2 io. Fa raha izany no mitranga dia afaka mahita izany isika ho tonga ny telefaona miaraka amina endrika vaovao, satria inona no ho efijery amin'ilay fitaovana efa voasivana. Ao aminy no ahitantsika endrika nohavaozina tamin'ny marika sinoa.
Tamin'ny taon-dasa dia nampiasa ny marika nentim-paharazana tamin'ny finday izy ireo, iray amin'ireo lamaody lehibe tamin'ny taon-dasa. Noho io antony io, amin'ny taranany vaovaon'izy ireo dia miditra amin'ny lamaody farany izy ireo. Hatramin'ity Pocophone F2 ity dia hanana hakan-drano miendrika rano mitete iray raha izany dia. Azonao jerena amin'ny sary etsy ambany ny mety ho endrik'ity notch ity.
Drafitra ankehitriny kokoa izay hitantsika matetika eny an-tsena. Ny takelaka ao anatiny dia antenaina ho AMOLED mihoatra ny enina santimetatra ny habeny. Raha ny ambiny manokana, dia tsy misy mivaingana, na dia heverina ho izany aza hampiasa Snapdragon 855 toy ny processeur ao anatiny.
Efa tena vitsy ny fivoahana momba ny Pocophone F2 hatreto. Ity dia zavatra iray izay mandray anjara amin'ny fametahana fanontaniana amin'ny mety ho fandefasana ity fitaovana ity eny an-tsena. Toa niloka mazava tamin'i Redmi i Xiaomi, izay manana sakany midadasika kokoa ary manampy azy ireo hitombo eo amin'ny tsena.
Na ahoana na ahoana, manantena izahay fa tsy ho ela vaovao misimisy momba ity telefaona marika sinoa ity. Ny Pocophone F2 dia mety ho finday mahaliana, toy ny teo aloha. Modely avo lenta miaraka amin'ny vidiny ambany, izay tsy isalasalana fa fitambarana miteraka fahalianana amin'ny tsena ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Pocophone F2 dia hanana endrika vaovao
Samsung dia tafarina amin'ny telovolana faharoa amin'ny taona